E book Reader — MYSTERY ZILLION
July 2011 edited July 2011 in Mobile
ebook reader နဲ့​ပတ်​သတ်​ပြီး​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။ သုံး​ဖူး​သူ​များ၊သုံး​နေ​သူ​များ​ရှိ​ရင် အကြံပေး​ကြ​ပါ။ ဘယ်​ဟာ​၀ယ်​ရ​မ​လဲ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်။ ရန်ကုန်​ဘယ်​နေရာ​မှာ​ရောင်း​လဲ​မ​သိ​ဘူး။
ebook reader ဆိုရင် Amazon Kindle နဲ့ Nook အမျိုးအစား ၂ ခုကတော့ လူကြိုက်များတယ်။ ebook reader သုံးပြီး မြန်မစာအုပ်တွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nook Color က ပို အဆင်ပြေမယ်။ တကယ်လို့ US မှာ နေရင်တော့ Kindle က Nook ထက်စာရင် ပို သင့်တော်တယ်။ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ Nook Color ကို ဝယ်ပြီး root လုပ်လိုက်ရင် Android tablet လို အသုံးပြုလို့ရသွားပါတယ်။ apk file တွေလည်း သွင်းလို့ရပါတယ်။
Kindle ကတော့ E-Ink အမျိုးအစားပဲ ရှိတယ်။ Nook ကတော့ Android Base ဖြစ်တဲ့ Nook Color နဲ့ E-ink version Nook ဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိတယ်။ E-ink က LCD screen ထက်စာရင် battery life က ပိုကြာပါတယ်။
Nook ကိုတော့ http://www.barnesandnoble.com/nook/index.asp မှာ လေ့လာလို့ရတယ်။
Kindle ကိုတော့ http://www.amazon.com/Kindle-Wireless-Reader-Wifi-Graphite/dp/B002Y27P3M
rooting.apk ရော​လွယ်⁠လွယ်​ရ​နိုင်​သလား​အစ်ကို။ huawei C8500 android 2.2.1 မှာ​သုံး​တဲ့ rooting.apk နဲ့​ရသ​သား​အစ်ကို။
no. it's not the same. Check nook color rooting at http://nookdevs.com/NookColor_Rooting